Qoraal “Gabadhii aan la noolaa oo muddo Dheer i garaaci jirtay ayaa Maanta la xukumay” Ka Akhriso Xaga Hoose? | Hubsad News
Qoraal “Gabadhii aan la noolaa oo muddo Dheer i garaaci jirtay ayaa Maanta la xukumay” Ka Akhriso Xaga Hoose?
February 19, 2019 - Written by weryayaasha shabakada hubsad
Hargeysa ( Hubsadnews): Weligeey ma illoobayo dhacdadii ay iigaysatey gabadhi aan la noolaa ee Jordan” biyaha kulul ayeey madaxa igaga shubi jirtay, iyada oo isii diyaarsatay jalmad biya kulul ay ku jiraan, mudda seddex sano ah ayaanu wada nooleyn .
Waxayna mar walba ii sheegi jirtay ayuu yiri Alex “inaan midabka cawl-ka ah aan soo xidhaniin, timaha sida aan u jarto oo ay wax ka sheegto iyo xadgudubyo kale oo aad u badan oo ay muddo sagaal bilood ah igu haysay”.
“xilliga ay biyaha kulul igu shubtay jirkeyga oo dhan waxaa ku guntamay nabarro afka biya ku wata waxaanna xilligaasi dareemayey xanuun aanan weligeey horay u soo marin, marar badan ayaan ka codsaday iney ii oggolaato in aan qolka qobeyska tago si aan biya qabow u raadsado balse wey iga diidi Jirtay”.
“Runtii waxaan billaabay inaan niyad jab aad u weyn kala kulmo nolosha aan Jordan Waxaan ku fikiri jiray in aan iskaga caraaro balse meel kale maan garameyn oo ,magaalada aan ku noolahay danteyda ayaa ku xidhneyd,
sidaa oo ay tahay waan iskala noola balse markasta oo ay iga dareento inaan la noolaashaheeda ku faraxsaneyna xadgudubyadi ay caadeysatay ayey igu sii wadday jirtay ayuu yiri Alex.
maantase way dhimatay inkasta oo aan ka xumahay balse naftayda iyo jidhkeeygii ay dhibi jirtay wey ka nasan doonaan?